आफ्नै बुहारीबाट बेचिएकी महिलाको बयान
उनीसंग कुरा गर्दा आखाँ भरिएर आए । उनी हिक्का छोड्दै रुदाँ उनलाई के भनेर सम्झाउने मसंग कुनै शब्द थिएन । झण्डै मेरी आमाको उमेर बराबरकी महिला कुटनैतिक आवरणमा रहेका राक्षसहरुको शिकार बनिन् । उद्धार भएर नेपाल त आईन् । उनी चिन्ता मुक्त अझै थिईनन् । आफ्नै बुहारीले उनलाई बेचेकी थिईन्, पहिला देखी नै वेबास्ता गर्ने छोराहरुको रबैया अब उनी माथी के होला ? केहि त बेचबिखन बिरुद्ध काम गर्ने संस्थाले उनलाई पालेर राखेको छ । त्यहाँबाट निकालेपछि उनी कहाँ जान्छिन् ? कहाँ बस्छिन् ? उनीसंगै उत्तर छैन । उनी कसरी राक्षसहरुको पञ्जामा परिन् ?, उनी माथी के के भयो ?
आश्विन १, २०७२- सुन्तली तामाङ, ४८ र मीना नेपाली, २६ (दुवैको नाम परिवर्तन), बुधबार केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको एउटा कोठामा धुमधुम्ती बसिरहेका थिए । भारतको नयाँदिल्लीस्थित साउदी दूतावासका कर्मचारीले यी दुई महिलालाई तीन महिनादेखि याैन शाेषण गरेका थिए । उनीहरुले आफ्नो सामूहिक बलात्कार भएको बयान दिएका थिए । दार्जिलिङ घर भएकी एक नेपालीभाषी युवतीले यी दुई महिलाको उद्धारमा मद्दत गरेकी थिइन् । उनीहरूलाई एक साताअघिमात्र दिल्लीबाट उद्धार गरी नेपाल ल्याइएको हो …